Ememme Nkiri International nke Zanzibar na Boost Island Tourism
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ na -agbasa na Tanzania » Ememme Nkiri International nke Zanzibar na Boost Island Tourism
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • omenala • Akụkọ Ọchịchị • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • News • Akụkọ na -agbasa na Tanzania • Tourism • Mmelite nke Njem njem • trending Ugbu a • Akụkọ dị iche iche
Onye isi Zanzibar na ememme ihe nkiri mba ụwa
Onye isi oche Zanzibar Hussein Ali Mwinyi kwadoro ndị na-ahazi Zanzibar International Film Festival (ZIFF) kwa afọ wee kwuo na mmemme ahụ ga-ekpughe ma zụlite njem nlegharị na agwaetiti ahụ.
ZIFF bụ otu n'ime ememme mmemme izizi Africa, na-egosi ya dị ka mmemme dị mkpa.
Onye isi ala Mwinyi kwuru na Zanzibar State House na emume a ga-enye aka iwulite ma kpọsaa njem nlegharị anya nke Zanzibar.
Mwinyi kwadoro na gọọmentị ga-aga n'ihu na-arụkọ ọrụ ọnụ na ZIFF iji hụ na ọ ga-aga n'ihu na-enwetakwu ihe ndị ọzọ.
Emere Zanzibar International Film Festival na 24 afọ gara aga na nnukwu ihe ịga nke ọma na Zanzibar. Ihe omume nke afọ a ga-eme site na July 21 ruo 25 na Stone Town, Zanzibar na-eduga ebe ndị njem nleta na ebe ndị njem nleta.
Ndị na-ahazi ZIFF nke afọ a adọtala ihe karịrị 240 nkiri site na mba 25. Tanzania nwere ihe nkiri iri na atọ ebe Kenya nwere 13, Uganda 9, na South Africa 5.
Enwere ihe nkiri 67 ahọpụtara maka nyocha n’afọ a, yana ihe nkiri 10, ihe ngosi 5, na ihe nkiri 40 dị mkpirikpi na ihe nkiri na asọmpi, ZIFF Director Prọfesọ Martin Muhando kwuru.
“N’afọ a, anyị nwetara ihe karịrị narị fim 240 n’ozuzu ya. Anyị natara ihe nkiri sitere na mba 25 gụnyere nke izizi ihe nkiri si Estonia, “ka ọ gbakwụnyere.
Ememme Ebumnuche iji mata ma kwalite sinima mba ụwa dị ka nka, ntụrụndụ, yana ụlọ ọrụ, na-akwalite mkparịta ụka, ikike ụmụ mmadụ, na nnwere onwe.
Site na mmemme ya, ememme a ruru ọtụtụ ndị na-ege ntị, nke bụ ihe na-eme ka ZIFF dị iche.
Prọfesọ Muhando kwuru na ememme ahụ na-enye nnukwu onyinye maka nghọta ka mma nke sinima site na nzukọ ọha na eze, nyocha obodo, na egwu na usoro nka.